Software Defined Television အတွက် Cinegy သည် SRT ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Cinegy ဆော့ဝဲသတ်မှတ်ထားသောရုပ်မြင်သံကြားများအတွက် SRT ခါနီး
IBC 2019, 13-17 စက်တင်ဘာလခန်းမ7A01 ရပ်: Cinegy, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရဝုဏ်အပေါ်ထုတ်လွှင့်ပလေးအောက်ဆော့ဖ်ဝဲခေါင်းဆောင်မျိုးစပ်ခြင်းနှင့်မိုဃ်းတိမ်၌, လုံလုံခြုံခြုံယုံကြည်စိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (SRT) ၏ပါဝင်၏မျိုးစုံအားသာချက်များအဖြစ် IBC 8 မှာယင်း၏တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ကုန်အကွာအဝေး၏ 2019K စွမ်းရည်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။
ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု Lewis က Kirkaldie ၏ Cinegy ဌာနမှူး SRT တစ်နေရာရာမှာတစ်ကေဘယ်လ်ထဲမှာ plugging အားဖြင့်ဆက်သွယ်မှုတည်ထောင်ရန်ရှိခြင်း၏တင်းကျပ်ချည်နှောင်ချိုးကြောင်းမှော်တစ်ခုအပိုနည်းနည်းဖြစ်ပါတယ် "ဟုပြောသည်။ SRT မှတဆင့်တစ်အချက်ပြရန်နှင့်ကြောင့်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်အဘယ်အရပ်ကရရှိသွားတဲ့သေချာစေရန်စွမ်းရည်ယခုဖြစ်နိုင်နှင့်ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပါနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။
"ဘာကိုဆိုလို SRT နှင့်အတူသင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်နေရာတိုင်းမှာကမိုဃ်းတိမ်၌, ငှားကို virtual စက်တွေပေါ်ပေါ်-Prem, ဒါမှမဟုတ်ဝေးလံခေါင်သီဒေတာစင်တာများမှာဖြစ်အကြောင်းအရာ, tools များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုနေရာချထားနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ "
Cinegy ရဲ့အမြင်စှာတှဲမြားကို simplifying စဉ် SRT ၏ရင့်ကျက်အသစ်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသာရှိပြီးအကွာအဝေးမှတံခါးကိုဖွင့်လှစ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
"SRT အကြီးအကျယ်ပြည်တွင်လွတ်လပ်ရေးဖော်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုထပ်မံ Kirkaldie ရှင်းပြသည်။ "SRT ဤမျှလောက်လွယ်ကူစေရန် system ကို design ကိုမှန်ကန်စေသည်။ သငျသညျမသက်ဆိုင်ဘဲမူလသွင်းအားစု, အကျိုးရလဒ်များ, ဒါမှမဟုတ်တည်နေရာ, သင်လိုအပ်အတိအကျရလဒ်ကိုအတူသင်တို့ကိုကယ်ယူချင်အတိအကျဘာဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ် bandwidth ကိုကန့်သတ်မှုကြောင့်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များအလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့မဆိုအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ရှိပါသည်။ "
SRT အသုံးပြုသူများ software ကိုလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ရန်အတွက်ဥပဒေရေးရာခွင့်သင့်လျော်ကြေးပေးသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်လုံလောက်သော bandwidth ကိုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖယ်ရှားပေးသောလိုင်စင်, အပါအဝင် Cinegy software ကိုမှ၌ဖုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
8K ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ Cinegy 8K-အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်၎င်း၏တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ကုန်လိုင်း optimized ခဲ့ပြီးမိုဃ်းတိမ်၌တပ်ဖြန့်။ အသစ် Cinegy မြင်ကွင်းစုံ, နိုင်စွမ်း 8K ဖြစ်ခြင်းအပြင်နောက်ထပ်တိုးတက်လာသောယင်း၏ပြီးသားအထင်ကြီး GPU ကိုသင့်မြတ်အောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Cinegy Air ကို PRO ပလေးအောက်နှင့် Cinegy PRO စားသုံးမိ Capture နှင့်အတူတွဲသည့်အခါဤအမြင်ကွင်းစုံ ပို. ပင်အစွမ်းထက်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေသည်။
Cinegy PRO Capture များအတွက် Cinegy Air ကို PRO အတွက်တိုးမြှင့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်ထိရောက်မှု၏အမွှာအကျိုးကျေးဇူးများကိုအညီအမျှအကျိုးရှိ features တွေဖြစ်ကြသည်။ တူညီသောဟာ့ဒ်ဝဲကိုသုံးပြီး, နှစ်ဦးစလုံးစနစ်များကိုသာ 8 အထိမှာ 10-bit မှာထဲမှာ 60K ဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း UHD / 4K လေးလိုင်းများ။
Cinegy ထုတ်ကုန်ရောထွေး SD ကကို process နိုငျသညျ, HD, 4K / UHD နှင့် 8K ကို formats - အဖြစ်လက်ကိုင် HDR - ဖမ်းယူဘို့, ပလေးအောက်, စောင့်ကြည့်ရေး, သတင်း, တည်းဖြတ်, ဒါမှမဟုတ်ပေးခဲ့သည်။ IBC 2019 မှာပြသထုတ်ကုန်အားလုံးချက်ချင်းဖြန့်ကျက်မှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
4K 8K Cinegy Cinegy Air လေကြောင်းလိုင်း PR စနစ် Cinegy PRO Capture Cinegy မြင်ကွင်းစုံ မိုဃ်းတိမ်ကို တည်းဖြတ်ခြင်း GPU ကို optimization HD HDR ဟိုက်ဘရစ် IBC IBC2019 စားသုံးမိပါ ပေးခဲ့သည် စောင့်ကြည့်မှု သတင်း On-ရဝုဏ် ပလေးအောက် SD ယုံကြည်စိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Secure SRT UHD 2019-07-17
ယခင်: IDS ပလက်ဖောင်း၏ Densitron ကြေညာချက်များသိမ်းယူမှု
နောက်တစ်ခု: Dejero သည် IBC5အားနောက်ဆုံးပေါ် 2110G Ready Solutions နှင့် SMPTE ST 2019 Support ကိုယူဆောင်လာသည်